Izindaba - Izinto ezine ezidinga ukunakekelwa ekusetshenzisweni kwezingcingo eziqhutshwa umakhalekhukhwini ukuvikela amasiginali engqungqutheleni
Izinto ezine ezidinga ukunakwa ekusetshenzisweni kwezingcingo ezihamba phambili zomakhalekhukhwini ukuvikela isiginali engqungqutheleni
Njengamanje, kunemikhiqizo eminingi yama-jammers esignali yamaselula emakethe, kepha ngokuyisisekelo ahlukaniswe ngezigaba ezimbili: imishini yobunjiniyela nemishini ejwayelekile. Njengoba igama liphakamisa, imishini yobunjiniyela ijwayele ukusetshenziselwa amaphrojekthi afunwa kakhulu futhi asezingeni eliphakeme. Izici zabo zidinga ukusebenza okuzinzile, ukufaniswa komsebenzi ngokuya ngemvelo yomsakazo esizeni, nokusebenza okungaphazanyiswa kwamahora angama-24. Amafoni ajwayelekile angamadivayisi asetshenziswa okwesikhashana isikhashana. Ukusebenza kwabo akwaziwa, okungathinta isignali yabanye yokusebenzisa ifoni ephathekayo, futhi kungavimba nendawo ofuna ukuyivimba kepha engenakusetshenziswa ngempumelelo.
Imvamisa ababaningi abantu egumbini lomhlangano, futhi abantu babuthana kuphela lapho bedinga ukuba nomhlangano, futhi ngasikhathi sinye, kunesimo lapho izingcingo eziphathwayo zihlangana khona. Ngesikhathi somhlangano, kungenzeka ukuthi ifoni yalo muntu izokhala isikhashana, nefoni yalowo muntu izokhala isikhashana. Ngakho-ke, kubalulekile kakhulu ukufaka isihlangu segumbi lenkomfa. Ngakolunye uhlangothi, kusika ukuphazamiseka kweselula emhlanganweni, kanti ngakolunye uhlangothi, kungasiza futhi ngempumelelo imfihlo yokuqukethwe komhlangano.
Ngakho-ke, yiziphi izinyathelo zokuqapha ekukhetheni ama-jammers efoni ephathekayo okuvikela isignali emakamelweni enkomfa?
1. Khetha okokuvikela kusuka kumenzi ojwayelekile, okungcono ngombiko wokuhlolwa okhishwe nguMnyango Wezokuphepha Komphakathi;
Okwesibili, ukuze uqinisekise ukusebenza komphumela wokuvikela, zama ukusebenzisa imishini yobunjiniyela, njengemishini ephathekayo yobunjiniyela, engavulwa lapho kudingeka, futhi ingavalwa ngemuva kokusetshenziswa;
3. Ngaphambi kokufakwa, zama ukuthi ochwepheshe bahlole amasignali efoni ephathekayo ukuze awavikele ngempumelelo ngaphandle kokuphazamisa abanye noma ukuchitha amandla;
Okwesine, ukhokhela lokho okukhokhelayo. Lapho isabelomali sivumela, zama ukukhetha imishini esezingeni eliphakeme, engonga izinkathazo eziningi ezingadingekile.